जहिले पनि घरमा लक्ष्मीको वास होस् भन्ने चाहनु हुन्छ ? त्यसो भए घरमा यी वस्तु कहिले पनि नछुटाउनुस् !
चैत १७, २०७५ PS
गाईको घ्यूको दियो
हिन्दु धर्म शास्त्र अनुसार गाईलाई लक्ष्मीको रुप मान्ने गरिन्छ भने गाईको घ्यूलाई अत्याधिक शुद्ध मान्ने गरिन्छ। यदि तुलसीको मोठमा गाईको घ्यूमा दियो बल्नु भएमा लक्ष्मी प्रसन्न हुने धार्मिक ग्रन्थहरुमा उल्लेख गरिएको छ। तपाईले सेतो धातु वा माटोको दियो प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ। साँझको पुजा गर्दा गाईको घ्यू प्रयोग गर्ने गर्नु होला।
पौराणिक विश्वासको अनुसार, शंखलाई लक्ष्मीको भाइ मान्ने गरिन्छ। जहाँ शंख रहने गर्छ त्यहाँ लक्ष्मीको वास रहने गर्छ भने धार्मिक विश्वास रही आएको छ। शंख धेरै प्रकारको पाइने गरे पनि दक्षिणावर्ती शंख अत्याधिक शुभ मान्ने गरिन्छ। पुञ्ज स्थलमा सेतो शंख स्थापित गर्नु भएमा घरमा लक्ष्मीको वास रही रहने छ।
ज्योतिष शास्त्रमा स्फटिकको मालालाई शुक्र ग्रहसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। शुक्र ग्रह धन-वैभव अनि विलासिताको कारक ग्रह रहने भएका कारण स्फटिक घरमा राख्नु धेरै शुभ मान्ने गरिन्छ। स्फटिकको माला घरमा राख्नाले घरको सम्पत्ति घटेर नजाने हुन्छ।
धार्मिक विश्वास अनुसारको गुलाबको फूल र गुलाबको सुगन्ध लक्ष्मीका दुवै प्रिय रहने गर्छन्। हरेक दिन लक्ष्मीलाई गुलाब पेश गर्दा व्यवसायिक पदोन्नति रहने हुन्छ। देवी लक्ष्मीलाई गुलाबका पातहरूले अभिषेक गर्दा ऋण घटेर जाने हुन्छ। हरेक शुक्रबार,लक्ष्मीलाई गुलाबको मल चढाउँदा घरको दरिद्रता हटेर जाने हुन्छ।
बिना विष्णु लक्ष्मीको अनुग्रह कहिले पनि नमिल्ने कुरा धार्मिक ग्रन्थहरुमा उल्लेख गर्ने गरिन्छ। त्यस कारण आरधना गर्ने स्थलमा लक्ष्मीको सँगै विष्णुको मूर्ति राख्नु पर्ने हुन्छ। साथै दिनहु दुबैको आराधन गर्नु पर्ने हुन्छ। यसो गर्दा परिवारका मुख्य व्यक्तिको कमाइ बढ्ने गर्छ भने हरेक परिवारका सदस्यलाई आर्थिक शुख मिल्ने गर्छ।
प्रकाशित : आइतबार, चैत १७, २०७५१०:४१
के तपाईलाई आर्थिक संकटले छोडेन ? भोलि मंगलबार गणेशजीको पूजा गर्दा जप्नुहोस् यी ११ मन्त्र।